Nhoroondo - Ningbo Jiali Plastics Co, Ltd.
NDEVO ZVAKANAKA, HUPENYU HUPENYU
Razor Purofesa Kubva 1995,Kwemakore anodarika makumi maviri neshanu, JIALI yakazvipira kupa yako ine hunyoro uye wakasununguka kuveura ruzivo. Nhaka yekutenda "chero bedzi paine moyo, hapana yakasungirwa kutapira", iri mukunyanyisa kwekuita kweye tekinoroji zviyero.
Isu tanga tichipa varoyi kubva kune rimwe blade kusvika kune matanhatu blade uye zvese zviripo kune varume kana vakadzi. Dhizaini yakasarudzika haisi iyo chete inopenya muchiono, asi zvakare fashoni modhi ine basa rakanakisa inosanganiswa zvine hungwaru mune zvese zvese kuti igadzire yekusingaperi uye yakanakisa kuveura chiitiko chako.
Naka Vakadzi Sarudzo
Sarudzo Yevarume Yakanaka
Blade, dhizaini, zvinhu, lubricating tambo uye tsvaga mubato unounza iwe kugadzikana uye kunzwa panguva yekuveura.
Ningbo Jiali epurasitiki shoma kambani indasitiri uye bhizinesi emakambani, iri mu Ningbo sainzi uye Technology Industrial Park. Iyo inovhara nzvimbo ye30 mu, nzvimbo yekuvaka ye25000 mativi emamita. Tine makore angangoita makumi maviri chiitiko chekugadzira reza. Reza huru yatinayo ndeya Four blade, triple blade, .twin blade uye single blade razor. Isu tinewo anokosha reza kushandiswa mujeri, zvekurapa uye zvichingodaro. Tinogona kuburitsa mazana emamiriyoni emamiriyoni emabhandi pagore. Zvigadzirwa zvinotumirwa kuEurope, United States, Australia, Middle East uye Southeast Asia nedzimwe nzvimbo, Uye zvakare tinobatana ne "ACHAN" SUPER MAX, Dollar muti, uye imwe kambani inozivikanwa.
Iyo kambani ine vangangoita 320 vashandi, vakuru manejimendi vashandi vevanhu makumi mana nevashanu, wepakati-chikamu injinjini vanhu masere, vashandi vehunyanzvi vanhu makumi mana, wekunze tekinoroji chipangamazano 2, koreji degree kana pamusoro pe50. Iyo kambani ine yakasimba timu yetekinoroji. design, kugadzira. Kutengesa uye sevhisi. isu tine rejista patent yechisvo inopfuura makumi maviri mhando kubva muna 2008-2011. isu tapedza yekutanga gungano mutsara wereza musoro muna 2009. Iye zvino isu tinopfuura gumi seti yemuchina uyu wekugadzira reza. Hunhu hwacho huri nani zvakanyanya kupfuura reza inosangana neruoko. Iye zvino tava chete fekitori imwe chete inogona kuungana nereza nemuchina uyu muchaina. Iyo kambani yakapihwa nzvimbo yehunyanzvi pane reza. Uye zvakare yakapihwa seyechokwadi kambani.
Iye zvino tine zvinopfuura makumi mana seti ye otomatiki jekiseni muchina. 4 seti yekukuya michina. 15 seti yegungano mutsara. 10 seti otomatiki kugadzirwa. Tine rabhoritari yebanga. Uye inogona kuyedza kuomarara .kupinza uye kona yekasi. Iwo matekinoroji anogona kuita kuti mhando yechisvo ive nani uye zvirinani.
Fekitori yedu yapasa chitupa che ISO9001: 2008 kukwidza danho rehutarisiro hwehunhu hwebhizinesi, (Pahwaro hwekubatsirana.) "Yakakwira mhando, Inonzwisisika mutengo, uye Yakanakisa sevhisi" ndiyo nheyo yekambani yedu. Welcome kushanyira fekitari yedu uye nekambani bhizimisi nesu. ruzivo. Tariro yedu ndeyekugadzira hukama hwakareba hune hukama hwebhizinesi hwakareba.